Doorashada xildhibaanada Banaadiriga ee Aqalka hoose oo maanta ka bilaabanaysa magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Doorashada xildhibaanada Banaadiriga ee Aqalka hoose oo maanta ka bilaabanaysa magaalada Muqdisho
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ka bilaabato doorashada xubnaha beelaha Banaadiriga kasoo galaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona qaban qaabada doorashadaasi ay haatan socoto.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal Cumar Dhageey ayaa sheegay in maanta oo ay taariikhdu tahay 30-ka bisha November 2016, magaalada Muqdisho lagu dooran doonno ilaa seddax kursi.
Seddaxdaasi kursi ayuu guddoomiyihu sheegay in lagu dooran doonno xubnaha beelaha Banaadiriga kasoo gali doonno Aqalka hoose ee baarlamaanka, iyadoona doorashadaasi ay maanta ka dhici doonto xarunta gaadiidka booliska degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, guddoomiye Cumar Dhageey ayaa sheegay in doorashada xubnaha labada Aqal ee kasoo jeeda deegaanada Somaliland ay iyadane goor dhaw bilaaban doonto.
Dhinaca kale, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u sheegay in haatan ay socoto qaban qaabada doorashada seddaxda xubnood ee beelahada Banaadirga uga soo galaaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Wuxuu afhayeenka inoo xaqiijiyay in doorashadaasi ay maanta ka dhici doonto xarunta gaadiidka booliska degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho, iyadoona ammaanka goobta ay doorashadaasi ka dhaceeyso si weyn loo adkeeyay.
Ugu dambeyn, ciidamo badan oo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ayaa maanta si weyn u adkeeyay ammaanka goobta ay doorashadaasi ka dhici doonto, waxaana la filayaa in xilliyada soo socdo ay doorashadaasi si toos ah uga bilaabato xarunta gaadiidka gaadiidka degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho.